အခြေအနေစိတ္တဗေဒစိစစ်မှု - ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (၂၀၁၄) ။ porn- သွေးဆောင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
မှတ်ချက်များ - အသေးစိတ် porn-သွေးဆောင် anejaculation တစ်ဦးအမှုထုတ်ဖေါ်။ သူ ejaculate နိုင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ - ကြိုတင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ခင်ပွန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့သည်။ သူလည်းညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်လျော့နည်း arousal အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်၏သော့အပိုင်းအစသည်သူ၏ anejaculation အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ပျက်ကွက် "Re-လေ့ကျင့်ရေးက" နှင့် psychotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားကြားဝင်ပျက်ကွက်သည့်အခါကုသ porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်မှာပြည့်စုံပိတ်ပင်မှုအကြံပြုသည်။ နောက်ဆုံးတော့ဒီတားမြစ်ချက်သည်သူ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါတနာတစ်နှင့်အတူအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
အတိအကျမသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက် porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းသည်အောင်မြင်မှုသို့ ဦး တည်သည် -
အိန္ဒိယ J ကို Psychol Med။ 2014 ဇူလိုင်-စက်တင်ဘာ; 36 (3): 329-331 ။
Anejaculation သည်အော်ဂဲနစ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး၏အကြောင်းရင်းများစွာမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ psychogenic anejaculation ဆက်ဆံရေး, အပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းလမ်းပြောင်းလဲမှုများ၊ အိမ်ထောင်ရေးဆက်သွယ်မှုနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းစသည့်ဤအချက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းစနစ်များပေါင်းစပ်။ စီမံခန့်ခွဲခဲ့သောအခြေအနေအခြေအနေပြသသည့်သန္ဓေတည်ခြင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ကိစ္စကိုတင်ပြသည်။ လူနာတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပြproblemsနာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်လိင်ကုထုံး၏စံနည်းစနစ်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်အကြံပြုထားသည်။
keywords: မ, ခွေးရူး, လိင်ကုထုံး
Anejaculation ပုံမှန်စိုက်ထူသို့မဟုတ် nocturnal ထုတ်လွှတ်မှုရှိနေသော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းသုတ်ရည်လွှတ်၏ပြီးပြည့်စုံမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။  ဒါကြောင့်ကျောရိုးဒဏ်ရာ, retroperitoneal တုံးမှာတက်စေ့ node ကိုခှဲစိတျ, များတွင်ဆီးချိုရောဂါ, transverse myelitis, မျိုးစုံနဗ်ကြောခြင်းသို့မဟုတ် psychogenic အကြောင်းတရားများကနေဖြစ်ပေါ်စေမည်။  အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်အတော်လေးဆန်းဖြစ်ပျက်မှုပေမယ့်, 12,000 ကျော် anejaculation သစ်ဖြစ်ပွားမှုနှစ်စဉ်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်မရှိသသရုပ်ဖော်အော်ဂဲနစ် etiology နှင့်ပြဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်းစားသည်အဘယ်မှာရှိအကြောင်းကို 1.5% ဟာ psychogenic ဇာစ်မြစ်ရှိသည်သော၏။ [3,4] အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ကဲ့သို့ပင် psychogenic anejaculation သို့မဟုတ်အခြေအနေ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါင်းတို့နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ) ယေဘူယျနိုင်ပါသည်။ [5,6] အခွအေနေ anejaculation ခံစားနေရသောအမျိုးသားများသည်လိင်မှုကိစ္စတွင်သတိရှိရှိသုက်ထွက်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ပုံမှန်စိုက်ထူခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကာလအတွင်းသုက်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်ထုတ်လွှတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ သီအိုရီတော်တော်များများသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်၍ သတိမရှိခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်နိုးထမှုအားနည်းခြင်း၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအားနည်းခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း (မိတ်ဖက်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်း) တို့ပါဝင်သည်။ (သို့) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်အပျက်သဘောသက်ရောက်မှု (မကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ရန်လိုမှု) သို့သော်ဤသီအိုရီများမှာလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားအနည်းငယ်သာရှိသည်။2,7,8,9,10,11] psychogenic anejaculation များအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့ကြပြီကုသမှုလိင်ကုထုံး, vibrator ဆွနှင့် electroejaculation ပါဝင်သည်။ [5,7] ကျနော်တို့အခွအေနေ psychogenic anejaculation အတူလူနာကိုဖော်ပြရန်။
မစ္စတာတစ်ဦးကလိင်ကွဲတိမ်းညွတ်နဲ့ 33 နှစ်အရွယ်လက်ထပ်အထီးတစ်အလယ်တန်းလူမှုစီးပွားမြို့ပြနောက်ခံကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူနဲ့သူ့ဇနီးလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ 18 လအကြာမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၏အကဲဖြတ်များအတွက်တင်ဆက်ခဲ့ရှိရာမျိုးဆက်ပွားဆေးပညာယူနစ်မှ Psychiatry ဌာနရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်အစပိုင်းတွင်ဖယ်ထုတ်လိုက်သော anejaculation ၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
မစ္စတာတစ်ဦးကစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် anankastic စရိုက်များရှိသည်ဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဝေးသောဝမ်းကွဲအတွက်စိတ်ရောဂါတစ်မိသားစုသမိုင်း, လက်လှမ်းမမှီပါခဲ့ကြရာ၏အသေးစိတ်ကိုရှိခဲ့သည်။ သူ 16 နှစ်ပေါင်းနှစ်အရွယ်တွင် obsessive-compulsive ရောဂါရှိသည်ဖို့သိလိုက်ရတယ်; လက္ခဏာများသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ဆေးဝါးပေါင်းစပ်နှင့်အတူလွတ်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံတင်ဆက်ထားပါတယ်၏ထိုအချိန်ကသူသည် (200 အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ mg) sertraline (50 နံနက်ယံ၌ mg), clomipramine (150 အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ mg), နှင့် bupropion ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
မစ္စတာအေသည်ရှေးရိုးစွဲဟိန္ဒူထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုလိုက်နာသောမိသားစုတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏မိဘများကသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပြင်းထန်စွာဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းမခံရမှီတိုင်အောင်၎င်းသည်ခဏတာဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ သူသည်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ သူ၏လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအသိပညာသည်လုံလောက်သည်။ လက်ထပ်ပြီးနောက်တွင်မစ္စတာအေသည်သူ၏လိင်စိတ်ကိုကန ဦး သာမန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏သုတ်ရည်လွှတ်မှုအခက်အခဲများကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်လျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီပုံမှန်ကြိုတင်ပြသခဲ့သည်။ လူနာသည်ထိုးဖောက်ရန်လုံလောက်သောစိုက်ထူမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ မိနစ် ၃၀ မှ ၄၅ မိနစ်အကြာတွင်လှုပ်ရှားမှုများရှိသော်လည်းသူသည်သူ၏ဇနီးနှင့်အတူထိုးဖောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်အော်ဂဇင်ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအော်ဂဇင်ကိုသုတ်သင်နိုင်ခဲ့သည်။ လူနာ၏ဇနီးသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်များစွာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်အောင်မြင်မှုမရှိဘဲ၊ ပြsuccessနာကိုကြိုးစားဖြေရှင်းရန်လိင်ရာထူးအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်နှစ် ဦး စလုံးအပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားချက်နှင့်ယုံကြည်မှုအားနည်းသောအိမ်ထောင်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးတင်းမာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မိသားစုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုများကြောင့်လင်မယားသည်ကလေးယူရန်ဖြစ်သည်။
မစ္စတာအေ၏ဆေးဝါးများသည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီသည်။ clomipramine နှင့် bupropion တို့ကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး sertraline ကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၅၀ မီလီဂရမ်ခန့်သောက်သုံးသည်။ စုံတွဲနှင့်အတူကုထုံးအစည်းအဝေးများကန ဦး လအနည်းငယ်အပတ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြသည်, ထိုနောက်မှသူတို့နှစ်ပတ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လစဉ်လှပခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို session ကို 150 မိနစ်ခန့်မှတစ်နာရီကြာခဲ့သည်။ ကနဦးအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလူနာနှင့်သူ၏ဇနီးသီးခြားစီမြင်ကြသဖြင့်, ကြာတော့ပေါင်းစပ်အစည်းအဝေးများကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်၎င်းတို့၏အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးရန်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူတို့ဒုက္ခရောက်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နှင့်ကုသမှုယုံကြည်ချက်စူးစမ်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဤအဒေသခံရပ်ရွာထဲတွင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းရှိကြ၏။ ကြိုးစားခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်စနစ်များကိုထှကျသှားစပွေီးသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မရှိဘဲဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာမော်ဒယ်နှင့်အတူဤအပေါင်းစည်းစေခဲ့သည်။  ကအိမ်ထောင်ရေးကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ဆောင်ရွက်ချက်များထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်အောင်အတူတကွသုံးစွဲအချိန်များ၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်အဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ လိင်ကုထုံး၏ PLISSIT မော်ဒယ်၏အခြေခံမူများအသုံးပြုခြင်း, စုံတွဲတစ်တရားဝင်ကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်။  technique ကိုနှင့် ပတ်သက်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်၏, သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်မဟုတ်ဘဲသုတ်ရည်လွှတ်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံအပါအဝင်တိကျတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ပရိသတ်လျှော့ချကူညီရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပြဿနာများသည်ဤဆောင်ရွက်ချက်ရှိနေသော်လည်းဆက်ရှိနေကတည်းကအထူးကြပ်မတ်လိင်ကုထုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုပုံစံပေါ်တွင်တစ်ဦးကတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုအကြံပြုခဲ့သည်။ တိုးတက်ရေးပါတီ Sensation အာရုံစိုက်လေ့ကျင့်ခန်း (အစပိုင်းတွင် Non-လိင်အင်္ဂါနှင့်အနောက်ပိုင်းမှာလိင်အင်္ဂါ) အစပျိုးခဲ့ကြသည်။ မစ္စတာတစ်ဦးကသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းကြုံတွေ့သောအရာမှနှိုင်းယှဉ်ပါကထိုးဖောက်မှုလိင်စဉ်အတွင်းဆွ၏တူညီသောဒီဂရီတွေ့ကြုံခံစားရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ပိတ်ပင်မှုပြဌာန်းခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာဆန္ဒသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်. ထိုကဲ့သို့သော, လက် switching အမြန်နှုန်း, ဖိအားနှင့် technique ကိုပြောင်းလဲနှင့်စက်ဆီချောဆီသို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးသုံးပြီးအဖြစ် Masturbatory ပြန်လေ့လာခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းပြီးတော့အစပျိုးခဲ့ကြသည်။ ဒီနောက်တွင်ထိုးဖောက်မှုလိင်ခွင့်ပြုသဖြင့်, ပရိသတ်လျှော့ချရန်ခြေလှမ်းများတစ်ဖန်ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤအတောအတွင်းမစ္စတာ A နှင့်သူ၏ဇနီး Assistant မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ (အေအာရ်တီ) နဲ့ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် Intrauterine သုက်နှစ်ခုသံသရာခံယူ။ တစ်ဦးအလေ့အကျင့် session တစ်ခုစဉ်အတွင်းမစ္စတာတစ်ဦးကသူသည်စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကတစ်အများစုစဉ်အတွင်းကျေနပ်ဖွယ် ejaculate နိုင်ခဲ့သည့်အောက်ဖော်ပြပါ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ejaculated.
psychogenic etiology ၏ anejaculation ၏ရောဂါဂန္ထဝင်ပု ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ variable ကိုသဘောသဘာဝအပေါ်အခြေခံသည်။  မစ္စတာတစ်ဦးကထိုးဖောက်မှုလိင်မှတိကျတဲ့ anejaculation ခဲ့ပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းပုံမှန် ejaculate နိုင်နှင့် nocturnal ထုတ်လွှတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်တိုင်းဖက်နှင့်ရှိသမျှသောအခွအေနနဲ့အခြေအနေတွေမှာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်တဲ့ဆေးဝါး-သွေးဆောင်သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ် ejaculatory ပျက်ကွက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်စိုး။
psychogenic anejaculation နှင့်အတူလူများ, သူတို့ရဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအပြုအမူ, ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပြီးမစ္စတာအေ၏အခြေအနေတွင်သွေးယိုစိမ့်မှု၏အဓိကကျပုံရသည်။
အမူအကျင့်အချက်များတစ်ဦးအဘို့အ preference ကိုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကနေထက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ သာ. ကြီးမြတ် arousal နှင့်ခံစားပါဝင်သည်။ သူတို့ရဲ့ masturbatory လှုပ်ရှားမှုမကြာခဏဆိုသလိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူထွက်ယူသွားတတ်၏ထားတဲ့အနေနဲ့ idiosyncratic နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်, ပါဝငျသညျ။ ဤသည်ကိုအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းကော်ပီပွားယူသည်မဟုတ်။ [5,8] ၎င်းကိုမစ္စတာအေ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ထင်ရှားခဲ့ပြီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတားမြစ်ထားခြင်း၊
ejaculatory ပျက်ကွက်အထောက်အကူပြုသောအခြားအချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ [မိတ်ဖက်ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားမှလေးစားမှု, လိင်နှင့်ဖျော်ဖြေတိကျတဲ့လိင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ] ကမိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်၏အဖြစ်မှန်များအကြားတစ်ဦးမညီမျှမှုဖို့ဆွဘို့အဦးစားပေးဆကျသှယျထားတဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းစိတ်ကူးယဉ်။ [5,8] မစ္စတာတစ်ဦးကလိင်ကုထုံးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြရာနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
"Ejaculatory စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်က" စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း, သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့မလုံလောက်ဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် arousal ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်ရရှိလာတဲ့, လိင်အင်္ဂါဆွများ၏ခေါ်ဆောင်သွားအာရုံနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။  မစ္စတာအေ၏ကိစ္စတွင်မျိုးပွားနိုင်ခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်မိသားစုများအားမျိုးပွားရန်ဖိအားပေးမှုများနှင့်အခြားအိမ်ထောင်ရေးပြconcernsနာများသည်သုက်ရည်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။14] တစ်ဦးသိမြင်မှုအမူအကျင့်မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. သည်ဤကိစ္စများ Addressing ဟာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်လည်းလိင်ကုထုံးနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအေအာရ်တီဆေးလျှက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းစိုးရိမ်စိတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းသွားဖို့သူ့ကိုအပေါ်ဖိအားကိုလျှော့ချကူညီပေးခဲ့ကွောငျး postulate ။
Psychogenic anejaculation ဆက်ဆံဖို့အတော်လေးခက်ခဲကြောင်းတစ်လက်တွေ့အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ PLISSIT မော်ဒယ်အသုံးပြုတဲ့အခြေခံမူဘောင်ခဲ့စဉ်တွင်ကုထုံးဟာ idiosyncratic ကိစ္စများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ရှည်၏တိကျသောပြဿနာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဆေးလျှော့ချ masturbatory နည်းစနစ်ပြောင်းလဲ, ကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်း, သိမြင်မှုအမူအကျင့်နည်းစနစ်အားဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်သောဖိအားကိုလျှော့ချဖို့သုက်၏အသုံးပြုမှုကိုလူနာကသူ့ ejaculatory အခက်အခဲများကျော်လွှားကကူညီပေးခဲ့၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ်။ , လိင်နှင့် ပတ်သက်. အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှိတယ်လျှော့ချခြင်း, စုံတွဲနှင့်ကုထုံးနှင့်လူနာအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဒီရှုပ်ထွေးပြဿနာဖြေရှင်းအတွက်ကူညီပေးခဲ့ကွောငျးသိသာထင်ရှားသောအချက်များဖြစ်ကြသည်အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး။ ထိုကဲ့သို့သောကုထုံးသည်၎င်း၏ထိရောက်မှု, အကျိုးသက်ရောက်မှု, ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးရှိအကဲဖြတ်ရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိဖြစ်ပွားမှု၏ကြီးမားသောစီးရီးများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
1 ။ Colpi, G, Weidner W က, Jungwirth တစ်ဦးက, Pomerol J ကို, Papp, G, Hargreave T က, et al ။ အမျိုးသားမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအပေါ် EAU အလုပ်အဖွဲ့ပါတီ။ ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် EAU လမ်းညွှန်ချက်များ။ EUR Urol ။ 2004; 46: 555-8 ။ [PubMed]
2 ။ ရစ်ချတ်ဆန်: D, Nalabanda တစ်ဦးက, Goldmeier ဃနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်-ပြန်လည်သုံးသပ်။ int J ကို STD AIDS ရောဂါ။ 2006; 17: 143-50 ။ [PubMed]
3 ။ Kamischke တစ်ဦးက, ejaculatory မမှန်များ၏ဆေးကုသမှုအပေါ် Nieschlag အီး Update ကို။ int J ကို Androl ။ 2002; 25: 333-44 ။ [PubMed]
4 ။ Schuster TG, Ohl DA ။ ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှု။ Urol Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2002; 29: 939-48 ။ [PubMed]
5 ။ Althof SE ။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် / အော်ဂဇင်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2012; 24: 131-6 ။ [PubMed]
6 ။ ရစ်ချတ်ဆန်: D, Goldmeier ဃ BASHH အထူးအကျိုးစီးပွား Group မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ပါ။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အကြံပြုချက်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် BASHH အထူးအကျိုးစီးပွားအုပ်စုသည်။ int J ကို STD AIDS ရောဂါ။ 2006; 17: 7-13 ။ [PubMed]
7 ။ psychogenic anejaculation ၏ Meacham R. စီမံခန့်ခွဲမှု။ J ကို Androl ။ 2003; 24: 170-1 ။ [PubMed]
8 ။ Perelman သညျ, MA, Rowland DL ။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 2006; 24: 645-52 ။ [PubMed]
9 ။ Rowland DL, Keeney, C, Slob AK ။ ဘယျလိုမှသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2004; 16: 270-4 ။ [PubMed]
၁၀။ Sadock BJ၊ Sadock VA၊ Ruiz P၊ Kaplan HI၊ အယ်ဒီတာများ။ Philadelphia တွင်: Wolters Kluwer ကျန်းမာရေး / Lippincott Williams & Wilkins; ၂၀၀၉ Kaplan နှင့် Sadock ၏ဘက်စုံစိတ်ကျန်းမာရေးပြဌာန်းစာအုပ်။
11 ။ Waldinger MD, Schweitzer DH ။ အမျိုးသားများတွင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 2005; 23: 76-81 ။ [PubMed]
12 ။ ယာကုပ်အမျိုးကို KS, ယဉ်ကျေးမှုများဖြတ်ပြီး Kuruvilla အေ Psychotherapy: အဆိုပါပုံစံ-content တွေကို dichotomy ။ Clin Psychol Psychother ။ 2012; 19: 91-5 ။ [PubMed]
13. Annon JS ။ နယူးယောက်: Harper & Row; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏ 1976 ခုနှစ်အပြုအမူကုသမှု: အကျဉ်းချုပ်ကုထုံး။
14 ။ Kaplan အိပ်ချ်နယူးယောက်: Brunner / မာဇယ်လ်၏; 1974 ။ The New လိင်ကုထုံး။